Banyere Q2 2017, nchịkọta ntanetị micro Ogologo iri nde mmadu iri nde mmadu n’ile ndi mmadu na-aru oru ugbua. Nke ahụ bhe ihe dị ka okpukpu un nke ndị Vācijā. Ma obu 8x onu ogugu nke Argentina. Ma obu 32x onu ogugu nke Portugal.
Uto nke Twitter, ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na, Twitter (isi iyi).
Lī ir vai nav? Ọ ị ị ye ye ye Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter n n n n n n we we we we we we we we we we we we.
Kedu otu azụmahịa si eme ka ndị na-ege ha ntịdị irè; ma rute ma na-ere ngwaahịa ha nye onye ziri ezi na Twitter?
1.2 Pārliecinieties, ka nav tīmeklī izveidotu atsauču
1.3 Es neesmu akpata ngwaahịa
2 2. Mepta akara njirimara
2.1 Ezigbo ir viss, kas jums ir saistošs, bet ir ļoti labs.
3 3. Brauciet na ọnọdụ ndị na-adịbeghị anya
Onye dị umeala n’obi ma dị ike Twitter Hashtag (#) nyere aka jikọta azụmahịa na ndị na-azụ ahịa site n’ịkpakọta ọnọdụ ma ọ bụ isiokwu. Nke a pụtara na we nudien ike ịbanye na ahịa ahịa na ahịa ziri ezi.
Vietne nav ịkekọrịta ọdịnaya ma jiri shehtags me ihe n’ụzọ dị irè na Twitter, wewere ike nike ịmepịta ahịa na ịmepụta ihe mgbaru ọsọ maka nzukọ gị na obere ego.
Tupu anyi abanye n’ime nke a, o nkpa icheta na dika ahia, usoro izo eji Twitter ga-adighi iche na onu ahia. Jide n’aka na ị vēl nebija atụmatụ ma na ọ na-akọwa ihe mgbaru ọsọ doro anya nke azụmahịa gị!
Ọ na-enye aka ịmekọrịta atụmatụ mgbasa ozi gị dịka akụkụ nke usoro atụmatụ ahia. Ebumnuche gị kwesịrị iji ihe mgbaru ọsọ mee ka ị nweta ihe mgbaru ọsọ azụmahịa. Nke nwere ike iyi ntakịrị mgbagwoju anya, ma ebe a, anyị ga – eso gị kọọrọ gị atụmatụ abụọ gbasara ahịa hashtag nke ga – enyere gị aka.
Nke abheghe ihe dhe iche na Twitter, ebe ọ bụ na ị na-asọmpụ ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ n’ebe ahụ. Vietne na ịmepụta ọdịnaya dị mma nke na-emetụta ma na-amasị mmasị n’ahịa gị, ị ga-enwe nsị dị mma karịa asọmpi ahụ.
Es neesmu izmantojis Web
Ejiri ihe na-eme ihe na-emetụta ihe na-eme, nke pụtara na usoro ndụ dị mkpụmkpụ ma lekwasị anya. Vai dịka ọmụmaatụ bija īsts zuru oke nke na-adịru ụbọchị atọ.
# atlaides dị ka anyị na-ejide kwa afọ #sale at #JCPenney ma nweta penny gị! Nanị ụbọchị 3! (īsās saites hipersaite) "
Pārliecinieties, ka nav tīmeklī izveidotu atsauču
Azụmahịa ndị dabeere na Tīmekļa balstīta pieeja, kas ir na-atụle na ụwa ahịa dịka "es esmu taisns".
Es neesmu akpata ngwaahịa
E wezụga nke ahụ, ọ na-enye aka ma ọ bụrụ na ị na-emepụta ihe n’ime ọdịnaya gị ma tinye mgbasa ozi dị mma dị ka ihe oyiyi ma ọ bụ vidiyo. Fotoattēls, kas tiek izdots, lai es kliedzu, ja tas nav izdarīts:
Foto vēl nav tik-na-ezipụ ozi na ndị mmadụ nekad nebija tik ma ma ma bụrụ na ederede ederede.
2. Mepta akara njirimara
Nke a abghh echiche ọhụrụ n’ụwa nke mgbasa ozi na ahịa kama ọ na-arụ ọrụ dịka nke ọma na Twitter ar karụa na ọ dị ndụ n’ezie. Čivināt ị ka ngwá ọrụ maka ịmepụta akara aha bụ ezigbo akụ dị mma ma nwee ike iji ya mee ihe n’ọtụtụ ụzọ ọ ga-esi gbanwee obi gị.
Ndị n’ozuzu ha na-ekwukarị ụdị ahịa ma ọ bụ ngwaahịa ha maara. Ihe ịma pazīstams kā na-aghọ ịghọ otu n’ime ụdị ndị ahụ. Vietne n’iji Twitter iji mepụta njirimara gị akara, ị ga-enwe ike ịbanye na mpaghara nke ihe ùgwù ahụ.
Dị ka ihe atụ nke a, ọ ga-abụ na ị maara okwu dịka "Ị gaghị aga ije naanị" ma ọ bụ "Nwee ezumike, nwee KitKat". Ejikọtara na mbụ Liverpool Futbola klubs, ikdienā, nke ọma, KitKat. Ievietojiet čivināt čivināt #YNWA nav #HaveABreak.
Ezigbo ir viss, kas jums ir saistošs, bet ir ļoti labs.
Vietne na nchikota ndi a, ulo oru ahu nwere uzo nke ndi ngbuputa nwere ike igosi uzo ha huru uzo di iche iche ma di nma nke nani ndi mmadu nwere ike iru. Na nkenke, ụdị ahụ na-eme ka ndị Fani na-ere ahịa ha!
Otu ihe iji rịba ama banyere usoro a n’agbanyeghị na ị ga-anwale ma tụọ anya otu esi eji ya. Vietne na iche echiche vietne na okike nke njirimara gi ma ọ bụ akara gị, ị ga-enwe ike izere ihere na-emecha mechaa.
Bija tikai viens otrs, bet Bils Kosbijs ieguva savam mērķim #Cosbymeme. N’ụzọ doro anya, ha na-enwe olileanya na ha ga-eji ike nke ala ha na-emepụta ma me ka hype banyere kpakpando ahụ. Ak, nwute na ha, nke a bu ihe omuma nke ihe mebiri:
3. Brauciet na ọnọdụ ndị na-adịbeghị anya
Nke a bara uru karịsaa maka obere ụlọ ah na ndị nwere ike ịnweghi ihe mgbapụ nke ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na mgbasa ozi. Yighị ka ndị mmadụ ga-achọ #TomsPremiumSalmon, n’ihi ya enwerere ike ịnweta ngwa ngwa na ọnọdụ Twitter.
Ebe mbụ ị–ọ he he ga ga Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ na-enye ndụmọdụ na ihe ndị ọzọ nwere ike ịba uru, Twitter ga-enweta ozi kachasị mma ebe ọ bụ na ozi ahụ dị na ala ahụ.
Vietne na isoro usoro, ị ga-enwe ike ịkwalite ha ma na-ebugharị akara gị ma ọ bụ ngwaahịa
Tendenču karte, # Hashtags.org, nē Hastagify bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ na-emepụta i ndị na-emekarị ka ị nwere ike ile anya.
O doro anya na ọtụtụ ebe ndị ọzọ na-enye ọrụ ịkwụ ụgwọ tinyere ndị na-ewu ewu, nyocha na nyocha, n’ihi ya, ị ga-ahụ nkwụnye ziri ezi nke ụgwọụaụakeakeakeakeakeakeake.
Ụ ụ ụ ie ie na ụ ị ị we we we we we we we ike ike ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ọ ọ ọ ọ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg ụ ụ ụ ụ Twitter..
Nke mbụ: Es nekad neesmu izteicis 140 man ir odids.
Buru n’uche na čivināt gị na-echekarị banyere azụmahịa gị. Ọ bụrụ na ị na-atụ anya ka ndị na-ere ahịa gị bụrụ ndị ọkachamara, mgbe ahụ, atụla anya na ọ ga-erughị ala na onye na-adọrọ mmasị gị. Twitter maka azụmahịa abụghị naanị ihe a na-emme "naanị n’ihi na onye ọ bụla na-eme ya", ma ọ bụ ihe ngosi nke azụmahịa gị na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi.
Na njedebe nke ụbọchị, laghachi na isi ihe, nke bụ icheta i am just i ji nọrọ na Twitter. Ozugbo ị malitere Tweeting na-esote (atụ anya) nke ọma, ọ bụ oge iji mụta otú ọ dị irè hashtags gị.
Vietne n’ịgbaso nọmba ahịa dịka mgbasa ozi ahịa Twitter gị, ị ga-enwe ike ị ụ ke ọ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto ị ị ị ị. N’ebe a, ị ga-achọpụta na ihe kachasị ewu ewu, ọ bụghị mgbe niile bụ ihe kasị mma maka azụmahịa gị.
Iji mee nke a n’ụzọ dị mfe karị, we nudien ike ịmasị iji ụfọdụ n’ime Jason n’ime atụmatụ na hacks na ederede a.
Ọzọkwa – tas bija viss, kas bija pieejams freemium nke na-enyere gị aka ịdebe nyocha nke arụmọrụ nke mkpọsa twitter gị ma gbarie ya n’ime nrụrụ siri ike maka gị. Hootsuite, Ndị na-arụ ọrụ na-elekọta mmadụ, nē Hashtracking bụ ụfọdụ na, nwere ike ịnwale.
Na-adịgide adịgide, ọrọ na-emekọ ihe ọnụ, ma gee ndị na-ege gị ntị ntị mgbe ha na gị na-akpakọrịta na anyị na-emesi gị obi ike, dị ka Liverpool, #YNWA.
Banyere Q2 2017, nchịkọta ntanetị micro Ogologo iri nde mmadu iri nde mmadu n’ile ndi mmadu na-aru oru ugbua. Nke ahụ bụ ihe dị ka okpukpu anọ nke ndị Germania. Ma obu 8x onu ogugu nke Argentina. Ma obu 32x onu ogugu nke Portugalia.
Până la Twitter nu a făcut-o pe Twitter.
Lee este eu? Ụ bụghị onye ọ bụla na Twitter nu am fost mmasị na gị na ngwaahịa gị.
1.2 Obțineți hashtag-urile bazate pe web
Onye ịoaala n’obi ma dịke Twitter Hashtag (#) nyere aka jikọta azụmahịa na ndị na-azụ ahịa site n’ịkpakọta ọnọdụ ma ọ bụ isiokwu. Nke a pụtara na ịwere ike ịbanye na ahịa ahịa na ahịa ziri ezi.
Site-ul ịkekọrịta ọdịnaya ma jiri shehtags mee ihe n’ụzọ dị irè na Twitter, wwere ike ịmepụta ahịa na ịmepụta ihe mgbaru ọsọ maka nzukọ gị na obere ego.
Tupu anyi abanye n’ime nke a, o di nkpa icheta na dika ahia, usoro izo eji Twitter ga-adighi iche na onu ahia. Jide n’aka na ịwere atụmatụ ma na ọ na-akọwa ihe mgbaru ọsọ doro anya nke azụmahịa gị!
Nke a abụghị ihe dị iche Twitter, e Twitter bụ na ị na-asọmpụ ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ n’ebe ahụ. Site na ịmepụta ọdịnaya dị mma nke na-emetụta ma na-amasị mmasị n’ahịa gị, ị ga-enwe nsị dị mma karịa asọmpi ahụ.
Sunt omule dabeere
#discounts dị ka anyị na-ejide kwa afọ #sale at the #JCPenney ma nweta peny gị! Nanị ụbọchị 3! (hyperlink shortlink) "
Obțineți hashtag-urile bazate pe web
Azụmahịa ndị dabeere na Ga-abụ bazat pe web este un na-atụle na ụwa ahịa dịka "ire ere".
E wezụga nke ahụ, ọ na-enye aka ma ọ bụrụ na ị na-emepụta ihe n’ime ọdịnaya gị ma tinye mgbasa ozi dị mma dị ka ihe oyiyi ma ọ bụ vidiyo. O fotografie na-agwa a puku okwu nahe screams ire dị ka:
Poza de la care ne-am dezgropat ozi na ndị mmadụ nwere ike ma ọ bụrụ na ederede ederede.
Nke a abụghị echiche ọhụrụ n’ụwa nke mgbasa ozi na ahịa kama ọ na-arụ ọrụ dịka nke ọma na Twitter karịa na ọ dị ndụ n’ezie. Twitter dị ka ngwá ọrụ maka ịmepụta akara aha bụ ezigbo akụ dị mma ma nwee ike iji ya mee ihe nọtụtụ ụzọ ọ ga-esi gbanwee obi gị.
Ndị n’ozuzu ha na-ekwukarị ụdị ahịa ma ọ bụ ngwaahịa ha maara. Ihe akama aka a na-aghọ ịghọ otu n’ime ụdị ndị ahụ. Site-ul n’iji Twitter iji mepụta njirimara gara akara,-ga-enwe ike ịbanye na mpaghara nke ihe ùgwù ahụ.
Dị ka ihe atụ nke a, ọ ga-abụ na ị maara okwu dịka "Ị gaghị aga ije naanị" ma ọ bụ "Nwee ezumike, nwee KitKat". Exercițiu na mbụ na Liverpool Football Club, make ikpeazụ, nke ọma, KitKat. Ndị a asụgharịwo nụụọọịịị Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter naYN Twitter Twitter Twitter Twitter TwitterYN.
Site na nchikota ndi a, ulo oru ahu nwere use nke ndi ngbuputa nwere ike igosi use ha huru use di iche iche ma di nma nke nani ndi mmadu nwere ike iru. Na nkenke, ịdị ahụ na-eme ka ndị Fanii na-ere ahịa ha!
Am fost athe nke otu òtù Bill Cosby gbara mgbe ha kere ya #Cosbymeme hashtag. N’ụzọ doro anya, ha na-enwe olileanya na ha ga-eji ike nke ala ha na-emepụta ma mee ka hype banyere kpakpando ahụ. O di nwute na ha, nke a bu ihe omuma nke ihe mebiri:
Nke a bara uru karịsịa maka obere ụlọ ahịa ndị nkeere ike ịnweghi ihe mgbapụ nke ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na mgbasa ozi. O da nmadị mmadụ ga-achọ #TomsPremiumSalmon, n’ihi yawwwy kenweta ngwa ngwa na ọnọdụ Twitter.
Ka anyị kwuo na Tom na-ahụkarị na ọ bụ # peoil. Ihe doro anya ọ ga – eme bụ ịgbakwunye nke ahụ na tweet maka ndụ ọ hụrụ n’anya:
Trendsmap, # Hashtags.org, na Hastagify bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ na-emepụta ihe ndị na-emekarị ka ịnere ike ile anya.
O doro anya na ọtụtụ ebe ndị ọzọ na-enye ọrụ ịkwụ ụgwọ tinyere ndị na-ewu ewu, nyocha na nyocha, n’ihi ya, ị ga-ahụ nkwụnye ziri ezi nke ụgwọ ọnụụịị.
Ọ bụ ezie na atụmatụ dị na hashtag nkeere ike ịmepụta ndepụta nke dị ogologo kilomita, e nwere ụfọdụ ihe ndị dị mkpa iji head n’uche mkpokọta mgbe ị na-arụ Twitter.
Nke mbụ: I ww naanị 140 ihe odide.
Buru n’uche na tweet gị na-echekarị banyere azụmahịa gị. Ọ bụrụ na ị na-atụ anya ka ndị na-ere ahịa gị bụrụ ndị ọkachamara, mgbe ahụ, atụla anya na ọ ga-erughị ala na onye na-adọrọ mmasị gị. Twitter maka azụmahịa abụghị naanị e un na-eme "naanị n’ihi na onye ọ bụla na-eme ya", ma ọ bụ ihe ngosi nke azụmahịa gị na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi.
Sochie nsonaazụ mgbasa ozi gị na statistici
Na j ke n ke ụ ọ ọ ọ ọ ị lag lag lag lag lag,,,,,,,,,,,, iche mere ta mere mere Ozugbo ị malitere Tweeting na-esote (atụ anya) nke ọma, ọ bụ oge iji mụta otú ọ dị irè hashtags gị.
Site-ul n’ịgbaso nọmba ahịa dịka mgbasa ozi ahịa Twitter gị,-ga-enwe ike ịmepụta foto nke ọrụ na ihe na-adịghị. N’ebe a, ị ga-achọpụta na ihe kachasị ewu ewu, ọ bụghị mgbe niile bụ ihe kasị mma maka azụmahịa gị.
Ọzọkwa – enwere ọtụtụ ngwa freemium nke na-enyere gị aka ịdebe nyocha nke arụmọrụ nke mkpọsa twitter gị ma gbarie ya nime nrụrụ siri ike maka gị. Hootsuite, Ndị na-arụ ọrụ na-elekọta mmadụ, na Hashtracking bụ ọfọdụ na ị nerew kenwale.
Imirikiti saịtị ndị a na-efu ụfọdụ ego, ma chee na ọ bụ ego nime ahịa mgbasa ozi gị. E kwuwerị, ọ bụ na ego agaghị akwụ gị ụgwọ?
Ugbu a na ịwere echiche nke otu tweets nwere ike isi mee (ma ọ bụ ịkwụsị) azụmahịa gị, ị ga-enwe ike ịghọta kpọmkwem otú usoro ịzụ ahịa hashtag dị mkpa. Na-echeta mgbe niile na aha gị bụ inye ezigbo ahịa gị ahịa na ụdị ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ.
Jide n’aka jiri hashtags jiri amamihe mee ihe ma jikọta ha na Tweeturi ka ha dị mma, ma n’otu oge ahụ na-enweta uru ahịa.